P2 Yar Yar oo Pixel Pitch Gudaha Gudaha Soo Bandhigida Shirarka
Marxaladda gudaha, istuudiyaha TV-ga, riwaayad, baarkinka mawduuca, Waxqabadka Masraxa, Dhacdooyinka Tooska ah, Dj booth ee caweyska, riwaayadaha, xafladaha, munaasabadaha majaajillada, daaqadaha dukaanada ama bandhigyada, shirarka, dib u dhacyada marxaladda iyo meelo kale oo loogu talagalay xayeysiinta iyo ujeedooyinka madadaalada.
1. Heerka cusbooneysiinta sare waxaa lagu gaari karaa 3840HZ. Iyada oo leh tayada ugu fiican ee IC, waxay ku tusi kartaa saamaynta muuqaalka ee qumman.
2. Looma baahna in laga saaro dhinaca dambe ee guddiga si loo beddelo moduleka hogaaminaya.
3. Golaha aluminium ee tuurista 'Die' wuxuu ka dhigayaa golaha keliyuhu mid fudud sida 8KG.
4. Maaskarada sida gaarka ah loo naqshadeeyay waxay ka dhigi karaan xagasha daawashada jiifka ah illaa 140 digrii.
5. 500mmx500mm iyo 500mmx500x1000mm way isku qasi karaan adeegsiga, kuugu habboon inaad u adeegsato dhacdooyinka kala duwan.
6. Marka lagu daro dhalaalka tiknoolajiyadda otomaatiga tooska ah iyo korontada PFC, tamarta hooseysa waxay keydin kartaa tamar ka badan 35%, waxaa loola jeedaa in la badbaadiyo 35% lacag.
Iyada oo tiknoolajiyada soo-bandhigga LED-ka iyo baahida suuqa soo-bandhigga ay si joogto ah u sii kordhayaan, muuqaalka yar ee P2mm gudaha gudaha LED-ka ayaa hadda noqonaya mid aad loo jecel yahay. Waqtiga xaadirka ah muuqaalka P2 LED gudaha ayaa ah muuqaalka ugu yar ee pixel LED soo bandhig gudaha suuqa bandhig go'an ee gudaha. Muuqaalka P2mm Gudaha gudaha ee loo yaqaan 'SMD LED Display' waxaa si gaar ah loogu talagalay qeexitaan sare iyo is-barbardhiga sare kaas oo shaashadu u baahan tahay inay soo bandhigto sawir iyo muuqaal aad u muuqda oo loogu talagalay dhagaystayaasha, Iyada oo la adeegsanayo astaamaha cufnaanta Sare mitir laba jibbaaran iyo khadka 2.0mm iyo safka dheereynta, P2 bandhigay LED go'an waa doorashada ugu horeysay haddii HD heerka video loo baahan yahay in codsiyada gudaha. waana mid si ballaaran loogu adeegsado qolalka shirarka, qolalka kormeerka, qolalka koontaroolka, ama goob kasta oo ay ka jiraan waxyaabo aad uga duwan, daawasho-dhow ayaa loo baahan yahay.
Sannadihii ugu dambeeyay, Eachinled P2 shaashadda muuqaalka ee go'an ee gudaha ayaa imanaya wejiga hore waxayna xukumaan suuqa bandhigga LED-ka iyada oo kuxiran tayada, heerka sare, isku halaynta sare, xasilloonida sare iyo muuqaalka wanaagsan ee khibradda.
iyada oo la adeegsanayo xakamaynta adag ee wax soo saarka iyo qalabka tayo sare leh ee LED, Calaamadeena P2mm LED waxay soo bandhigi kartaa heer sare oo heer sare ah HD bandhig muuqaal ah, oo siineysa saameyn macquul ah oo muuqaal ah. iyo in ka badan, madow tayo sare leh SMD2020 LED si loo hubiyo in shaashadeena gudaha ee gudaha ee joogtada ah ee loo yaqaan 'P2mm' uu leeyahay dheelitirnaan cad oo weyn xitaa jawiga dibadda-semi-ka ah. Ka sokow, naqshadeynta golaha wasiirada ee mihnadlaha ah iyo naqshadeynta awoodda wax ku oolka ah si looga dhigo calaamadeena gudaha gudaha ee P2 mid gaar ah, deggan oo xasilloon. Intaa waxaa dheer, nidaamka xakamaynta muujinta hoggaanka caalamiga ah ee loo yaqaan 'LED-bandhigay' ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo Eachinled P2mm gudaha gudaha shaashadda LED-ga ee hawl fudud iyo maareynta maareynta maareynta maareynta. Ka sokow, mashaariic kala duwan oo qaan gaadh ah oo dibedda ah ayaa hagaajiyay waxqabadkayaga P2 LED waxqabadka oo dhan iyo inbadan oo macaamiil ah ayaa noo doorta sidii muddo dheer P2 alaab-qeybiye gudaha ah iyo bixiye. Waa sharafteenna, sidoo kale waa dhiirrigelin annaga, waxaan, sida had iyo jeer, u sameyn doonnaa dhammaan macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah leh tayo iyo pixel yar oo tayo sare leh gudaha gudaha badeecadaha iyo adeegyada.
ku soo dhowow inaad waxbadan ka barato bandhigkeena LED-ga ee gudaha ee P2